July 18, 2021 – Shwe Myanmar
စတေနာ့ဝနျထမျး နှငျ့သူနာပွုမြားကို နစေ့ားခ တဈသိနျးဖွငျ့လုပျကိုငျရနျ စညျးရုံးမှုမြားရှိလာ
Jul 18, 2021 Shwe Myanmar
Zawgyi COVID-19 ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုပူး ပေါင်းမှုဖြင့် ကျော်လွှားမယ်လို့ အာဏာသိ.မ်းစစ်ခေါင်း ဆောင် မိအောင်လှိုင်က ပြောခဲ့တဲ့နောက်မှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို နေ့စားခေါ်သုံးဖို့ လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လိုက်လံစည်းရုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ အင်းယားစင်တာမှာ လူအင်အား မလုံလောက်လို့ မေ.သသင့်ဘဲေ.သနေရသောလူနာတွေရှိနေတဲ့အတွက်…
ဦး ကြျော မိုး ထှ နျး လှဲ ပေး ရေး တော ငျး ဆို မှု အ ပျေါ အ မေ ရိ က နျ အ စိုး ရ တု နျ့ ပွ နျ ခြ ကျ
Zawgyi ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းကို မြန်မာစစ်တပ်က တရားစွဲဆိုရုံတင်မဟုတ်ပဲ မြန်မာပြည်ပြန်ပို့ဖို့ တောင်းဆိုနေတာကိုကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြ မ်းဖ.က်မှုတွေရပ်ဆိုင်းဖို့သာမက ဒီမိုကရေစီပြန်ထွန်းကားအောင် လုပ်ဖို့ ဘယ်လော က်အရေးကြီးနေတယ်ဆိုတာကိုပါ မီးမောင်းထိုးပြနေတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရက ကြာသပတေးနေ့မှာ ပြောပါတယ်။…
ကလေးငယျမြားခြှဲကပျြနလြှေငျ အလှယျကူဆုံး..အထိရောကျဆုံးနှငျ့ အသကျသာဆုံး မွနျမာ့ဆေးနညျး
Zawgyi ရင်သွေးကလေးငယ်များ ချွဲကျပ်ဝေဒ နာ ခံစားရပါက ဝေဒ နာ ခံစားနေရရှာသော ကလေးငယ်လည်း မသက်သာသကဲ့သို့ မိဘဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းမှာလည်း စိတ်သောကရောက်ရစမြဲပင်။နိုင်ငံခြားဆေးဝါးများ ရှိပါသော်လည်း ဈေကမသေး။အခြားရောဂါနှင့် တည့်မတည့်ကိုလည်း ချိန်ဆရပြန်သေးသည်။ သည့်အတွက် ကလေးငယ်များ ချွဲကျပ်နေခဲ့ပါက ငွေကုန်ကြေးကျနည်းပါးလျက်…
Zawgyi ပိုက်ဆံတစ်ခုတည်းနဲ့ စားဝတ်နေရေးအရာအားလုံး ရပ်တည်နေရချိန်မှာ ကိုယ့်ပိုက်ဆံတွေသူများဆီမှာ အလဟသတ်ပေးထားရတာမျိုး သင်အဖြစ်ခံတော့မလို့လား။ သင့်ဆိုင်မှာအမြဲလာဝယ်နေကျ ဖောက်သည်က အကြွေးမပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခင်လို့မင်လို့ ပိုက်ဆံချေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်အလုပ်လုပ်ပေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို အလုပ်ရှင်ဖက်ကမပေးသေးဘဲ ကြန့်ကြာနေတာမျိုးတွေကို သင်တောင်းရမှာ အားနာစိတ်ဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လား။ ရည်ရှည်ဆက်ဆံရ မယ့်လူတွေဖြစ်တာကြောင့်…
ခမျြးသာတဲ့လူ နဲ့ ဆငျးရဲတဲ့လူ တှရေဲ့ အတှေးကိုယျစီ
Zawgyi (၁) လူချမ်းသာက “ငါ့ဘ၀ ငါဖန်တီးမယ်” လို့ ယုံကြည်ထားတယ်။ ဆင်းရဲသားက “ငါ့ဘဝ ငါ့အပေါ် ကျရောက် ချင်သလို ကျရောက်လာတယ်” လို့ ယုံကြည်တယ်။ (၂) လူချမ်းသာတွေက ငွေကြေးကစားပွဲကို အနိုင်ရအောင် ကစားကြတယ်။…
နို ငျ ငံ ရေး နဲ့ ဖ မျး ဆီး ထား သူ တှေ ကို ကို ဗ ဈ စ ဈ ဆေး မှု မ လု ပျ ရ နျ စ ဈ ကော ငျ စီ က ညှ နျ ကွား ထား
Zawgyi အင်းစိန်ထောင်မှာနိုင်ငံရေးနဲ့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုကိုဗစ်စစ်ဆေးတာတွေမလုပ်ဖို့မအလပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကလျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားထားကြောင်းအမည်မဖေါ်လိုသူအင်းစိန်ထောင်အရာရှိတစ်ဦးကပြောပါတယ်။ နွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းထားသူတွေကို ကိုဗစ်စစ်ဆေးလို့တွေ့ရှိရင်ဆေးကုသမှုပေးရေးနဲ့ကွာရန်တင်းနေရာချထားရေးတွေမှာအဆင်မပြေမှာစိုးတဲ့အတွက်ညွှန်ကြားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။NLDပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးဉာဏ်ဝင်းကိုကိုဗစ်ကြောင့် အပြင်ထွက်ဆေးကုသမှုပေးပြီးနောက်ပိုင်းအဲဒီညွန်ကြားချက်ထွက်လာတာလို့အဆိုပါထောင်အရာရှိကဆိုပါတယ်။ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေဖမ်းဆီးလာတဲ့အမေရိကန်သတင်းထောက် Danny Fensterကသူ့မှာကိုဗစ်လက္ခဏာတွေခံစားနေရလို့ စစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့အထက်ကခွင့်ပြုချက်မပေးသေးဘူးဆိုပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာကိုဗစ်လို့ယူဆရတဲ့အကျဉ်းသားရာချီရှိနေတယ်လို့လည်းအဆိုပါထောင်အရာရှိကပြောပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့(၁)ပတ်ကျော်ကတည်းကအင်းစိန်ထောင်ကို Lockdownချထားပြီးဇူလိုင်(၂၀)ရက်အထိlockdown သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ကူးစက်မှုအနေအထားကြည့်ပြီးထပ်တိုးနိုင်တယ်လို့လည်းအဆိုပါထောင်အရာရှိကပြောပါတယ်။အာဏာမသိမ်းခင်လပိုင်းကကထောင်တွင်းမှာလူသစ်ဝင်လာသူတွေကိုဗစ်စစ်ဆေးပေးတာရှိသလိုထောင်ဝန်းအတွင်းမှာကိုဗစ်ကုသဆောင်ပါဝန်ကြီးချူပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအစီအစဉ်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားရှိခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကပရမ်းပတာတွေဖြစ်ပြီးသေချာစစ်ဆေးတာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုပါတယ်။ ငွေပေးနိုင်တဲ့သာမန်ရာဇ၀တ်သားအကျဉ်းသားတွေနဲ့ထောင်ဆရာဝန်တွေနဲ့အဆင်ပြေသူတွေပဲစစ်ဆေးတာမျိူးရှိတော့တယ်လို့လည်းအဆိုပါအမည်မဖေါ်လိုတဲ့ထောင်အရာရှိကပြောပါတယ်။သူပြောပြချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အကျဉ်းဦးစီးညွန်ကြားရေးမှူးချူပ်ရုံးကို အတည်ပြုချက်ပေးဖို့မေးမြန်းရာမှာတော့မသိရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Shwe Myanmar သတင်းများကို ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။…
1 8 .7.2021 ယ နေ့ အ ထူး သ တ ငျး (ရု ပျ သံ ကွ ညျ့ ရ နျ)
18.7.2021 ယနေ့အထူးသတင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Shwe Myanmar သတင်းများကို ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန် ထပ်ဆင့် Share ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ… မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်း ရောဂါဘယကင်းဝေးကြပါစေ စီးပွားလာဘ်လာဘများ တိုးပွားကြပါစေ… ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်
ဒုက်ခရောကျနရှောတဲ့ ကိုဗဈလူနာတှဆေီကနေ အခကွေးငှမေယူဘဲ ကိုယျတိုငျအပငျပနျးခံပွီး အောကျဆီဂငျြဖွညျ့ပေးနကွေတဲ့ မွနျမာလူငယျလေးမြား
Zawgyi ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ လူနာတွေလည်း တိုးလာသလို သေဆုံးသွားတဲ့ ပြည်သူတွေလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှများပြားလာနေတာ​ကြောင့် Volunteersတွေအနေနဲ့လည်း နေ့မနားညမနားကူညီပေးနေကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေကလည်း ကိုဗစ်လူနာတွေကို အာဟာရရှိမယ့် စားသောက်ဖွယ်ရာတွေအိမ်ရှေ့အထိသွားရောက်ပို့ပေးပြီး ကူညီပေးနေကြပေမယ့် တစ်ဖက်မှာလည်း တစ်ခြားသောအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရရှာပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ လူနာတွေ၊အိမ်အပြင်ထွက်ဖို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ တန်းစီပြီး…
ပွညျသူတှကေို ကြေးဇူးပွနျဆပျတဲ့အနနေဲ့ ဝနျဆောငျခပေးစရာမလိုပဲ အခမဲ့ ဈေးဝယျပေးမဲ့ ပသေီးလူငယျစတား
Zawgyi “ပြည်သူတွေကို ကျေးဇူးပြန်ဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ဈေးဝယ်ပေးမဲ့ ပေသီးလူငယ်စတား ” ပြည်သူတွေ ဒီကာလမှာအဆင်မပြေခဲ့သော် ကျေးဇူးပြန်ဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ဈေးဝယ်ပေးပါ့မယ်လို့ ပေသီးလူငယ်စတားကသူ့ရဲ့ လူမူကွနိယက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့မိသားစုလေးရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ထမင်းရှင် Customer များကိုပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ…၊ ကျွန်တော်တို့မိသားစုလေး ဝင်ငွေမရှိအလုပ်ပါးနေစဉ်အချိန်အတွင်းမှာ အလုပ်ပေး…
ကို ဗ ဈ ရော ဂါ ကူး စ ကျ ခံ စား နေ ရ စ ဉျ ကာ လ အ တှ ငျး သူ မ ကို ယျ တို ငျ နေ ထို ငျ စား သော ကျ နေ တဲ့ န ညျး လ မျး တ ဈ ခြို့ အား ဝေ မြှ ပေး လာ တဲ့ ခေး ဆ ကျ သှ ငျ
Zawgyi ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံစားနေရစဉ် ကာလအတွင်း သူမကိုယ်တိုင် နေထိုင်စားသောက်နေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ချို့အား ဝေမျှပေးလာတဲ့ ခေးဆက်သွင် သရုပ်ဆောင် ခေးဆက်သွင်ဟာ လက်ရှိမှာ ကိုဗစ်ရောဂါဝေဒနာ ကူးစက်ခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် တိမ်းရှောင်နေစဉ်အတွင်းမှာ အခုလို…